रोइरहेका मलामीलाई मृ’तकले नै हँसाएपछि… – " सुलभ खबर "
रोइरहेका मलामीलाई मृ’तकले नै हँसाएपछि…
आयरल्याण्डका पूर्व सेना शे ब्राडलीको नि,ध,न ८ अक्टोबरमा भएको थियो । उनी आयरल्याण्डको सुरक्षा फोर्समा पूर्व सेना थिए । गत शनिबार उनलाई आफ्नो चलन अनुसार चि’हानमा पुर्न लैजाने तयारी गरिँदै थियो । मलामीमा आएका प्रायजसो रोइरहेका देखिन्थे । पुर्नका लागि तयार भइसकेको कोफिन भित्रबाट एक्कासी आवाज आयो ‘हेल्लो, हेल्लो यहाँ अ,न्ध,का,र छ, मलाई यहाँबाट निकाल, म बा,क,स,भित्र छु चाँडो मलाई बचाउ ।’ यो आवाज ब्रा,ड,,ली,कै थियो ।
म.ला.मी.मा आएकाहरु केहीबेर अ,च,म्म परे । पछि बुझे कि त्यो आवाज म र्नु अघि ब्राडली आफैले रेकर्ड गरेर राखेका थिए । उनकी छोरी एन्ड्रियाले ट्वीट गर्दै त्यो काम आफ्नै बुबाको अन्तिम चाहानामा गरिएको बताएकी छिन् । केही बेरअघि मात्रै रोइरहेका मलामीहरु उनको त्यो ठ,ट्यौ,ली थाहा पाएर हास्न थाले । ब्रा,ड,ली,को नि.ध.न पहिले नै निश्चित भएको र उनको चाहना अनुरूप नै उक्त भिडियो राखिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस : अण्डा शाकाहारी कि मां’शा,हा,री ? वैज्ञानिकले निकाले यस्तो निष्कर्ष
अण्डालाई मां’शाहारी खानेकुरा नमान्ने मानिसहरु पनि दुनियाँमा धेरै छन् । अर्थात् कतिपय आफुलाई शाकाहारी भन्नेहरुले पनि अण्डा खाने गर्दछन् । आखिर अण्डा शाकाहारी हो कि मां’शाहारी ? यस विषयमा मानिसहरुले लामो समयदेखि नै बहस गर्दै आएका छन् । तर वैज्ञानिकहरुले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएका छन् कि जसले अण्डा मां’शाहारी कि शाकाहारी भन्ने बहसलाई अब अन्त्य गरिदिनेछ ।
बजारमा पाइने धेरै अण्डाहरु बतासे, अर्थात् ग,र्भा,धा,न नभएका अ,ण्डा हुन् । अर्थात् यी अ,ण्डा,बाट चल्ला कोरलिँदैन । यसको अर्थ त्यस्ता अण्डाहरु विज्ञानको नजरमा शाकाहारी हुन् । अ,ण्डा,मा तिनवटा प्रष्ट तह हुन्छन् । पहिलो बाहिरी बोक्रा, दोश्रो सेतो भाग र तेश्रो पहेँलो भाग । सेतो भाग प्रोटिनको निकै उत्कृष्ट श्रोत हो । त्यसमा प्राणीको कुनै हिस्सा नहुने भएकाले अण्डाको त्यो भाग पूर्णरुपमा शाकाहारी हो ।
पहेँलो भागको कुरा गर्दा त्यसमा प्रोटिनसँगै कोलेस्ट्रोल र फ्याट पनि पाइन्छ । जब कुनैपनि अण्डा पोथीमा भाले लागेर पारिएको वा गर्भाधान भएको हुन्छ तबमात्र त्यो अण्डा मां’शाहारी बन्दछ । अन्यथा अण्डाको पहेँलो भागपनि शाकाहारी नै हुन्छ । अतः अण्डाका पारखीहरु अब ढुक्क भए हुन्छ । तपाइँ शाकाहारी हुनुहुन्छ भनेपनि तपाइँले नकोरेलिने बतासे अण्डा खान सक्नुहुन्छ । किनकि बतासे अण्डा शाकाहारी नै हुन्छ । एजेन्सी